सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता विष्णु रिजालले संकटका बेला अग्रपंक्तिमा खटिएका प्रहरीको तलब काट्ने निर्णय गलत भएको धारणा राखेका छन् । उनले सामाजिक संचाल ट्विटरमार्फत प्रहरीको तलब काट्ने निर्णय गलत भएको भएको बताएका हुन् ।
उनले उच्च पदस्थको वार्षिक तलब घटाउनुको सट्टा ज्यान जोखिममा राखेर अग्रपंक्तिमा खटिएका प्रहरीको तलब काट्न निर्णय निर्दयी र अविकेकी र खेदजनक रहेको बताएका छन् । उनले संकटका बेला मन्त्री, सांसद र अरू उच्चपदस्थको वार्षिक तलब घटाउनु पर्ने भन्दै मुलुक प्रहरीको तलब काटेर बाँच्नु पर्ने अवस्थामा पुगिसकेको भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।
संकटका बेला मन्त्री, सांसद र अरू उच्चपदस्थको वार्षिक तलब घटाउनुको साटो आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर अग्रपंक्तिमा खटिएका प्रहरीको तलब काट्ने निर्णय एकदमै निर्दयी, अविवेकी र खेदजनक छ उनको प्रश्‍न छ मुलुक प्रहरीको तलब काटेर बाँच्नु पर्ने अवस्थामा पुगिसकेको हो र ?
प्रहरी प्रधान कार्यालयले अधिकृतस्तरका कर्मचारीको सात दिनको तलब सरकारी राहत कोषमा बुझाउन मातहतका सबै निकायलाई परिपत्र गरेपछि सामाजिक सञ्जालमा तीव्र आलोना भाएको छ । यसअघि डा. रामेश कोइरालाले युद्धमा लड्ने सिपाहीको तलब काटेजस्तै भएको भन्दै यस्ता काम बन्द गर्न आग्रह गरेका थिए ।
सरकार संवेदनशील छ भन्नेमा कुनै शंकै छैन । तर, युद्धको बेला सिपाहीको तलब काटेर उनीहरू प्रोत्साहित भएको ठान्नु लरतरो IQ ले नभ्याउने कुरो भो । हिजो धरानले स्वास्थ्यकर्मीसँग अनुरोध गर्नु र आज सुरक्षाकर्मीको तलब काट्नु प्रोत्साहन हैन । यी काम बन्द गरौँ ! बरू सल्लाह दिनेलाई घरबाट निकालौँ ! सामाजिक संजालमा उनले भनेका छन् ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, चैत २७, २०७६, १२:३०:००